သုတဆောင်းပါးများဖတ်ရင်း စာဖတ်စွမ်းရည်မြှင့်ကြရအောင် (၆) - Myanmar Network
Posted by Language Republic on July 23, 2014 at 11:36 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့နေစကြာဝဠာအဖွဲ့အစည်းထဲက ဂြိုလ်တွေအကြောင်း သင်ဘယ်လောက်သိပါသလဲ။ ယနေ့ စာဖတ်စွမ်းရည်မြှင့်ကြရအောင် အစီအစဉ်မှာ learnenglishteens.britishcouncil.org မှ "The Carbon Planet " လို့ခေါ်တဲ့ အောက်စီဂျင်ထက် ကာဗွန်ပိုများသော ဂြိုလ်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ သိပ္ပံပညာရှင်တွေရဲ့ နောက်ဆုံး သုတေသနတွေ့ရှိချက်အကြောင်းတွေကို ရှင်းပြထားတဲ့ ဆောင်းပါးကို ဖတ်ရှုပြီး မှတ်သားဖွယ် ဝေါဟာရအချို့ကိုလေ့လာကြပါမယ်။
The Carbon Planet (အောက်စီဂျင်ထက် ကာဗွန် ပိုများသော ဂြိုဟ်)
ဂျူပီတာဂြိုဟ်ရဲ့ အရွယ်လောက်ရှိတဲ့ ဂြိုဟ်တစ်လုံးကို ရှာဖွေတွေ့ရှိထားပါတယ်။ ၎င်းသည် ကျွန်ုပ်တို့ သိထားပြီးသား ဂြိုဟ်တွေထဲက အပူဆုံးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတွေ့ရှိချက်က ဂြိုဟ်တွေရဲ့ ဖွဲ့စည်းထားပုံနှင့်ပတ်သက်ပြီး သိပ္ပံပညာရှင်တွေကို စဉ်းစားစေခဲ့ပါတယ်။
Heat signature (အပူရှိန်ဖော်ညွှန်းချက်)
Planets such as Earth have more oxygen than carbon, but what if the composition was reversed? This isaquestion opened up byarecent discovery ofa'diamond planet' by US and UK scientists, led by Nikku Madhusudhan of the Massachusetts Institute of Technology, and including researchers from Belfast’s Queens University and the University of Warwick.
ကမ္ဘာကဲ့သို့သော ဂြိုဟ်များတွင် ကာဗွန်ထက်အောက်စီဂျင်က ပိုများပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ တကယ်လို့ ဒီဖွဲ့စည်းပုံဟာ ပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားရင် ဘယ်လိုနေမလဲ? ဒီမေးခွန်းကိုတော့ မက်ဆချူးဆက်နည်းပညာတက္ကသိုလ် (Massachussets Institute of Technology) မှ Niku Madhusudhan ခေါင်းဆောင်တဲ့ US နဲ့ UK သိပ္ပံပညာရှင် တွေက "စိန်ဂြိုဟ်" (diamond planet) ကို လက်တလောရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တဲ့အခါမှာ မေးလာတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအဖွဲ့ထဲမှာ ဘယ်ဟ်ဖတ်(ခ) ဘုရင်မတက္ကသိုဟ် (Belfast Queen's University) နှင့် ၀ါးဝစ်(ခ) တက္ကသိုဟ် (Warwick University) မှ သုတေသန ပညာရှင်တွေလည်း ပါဝင်ပါတယ်။
The planet is 1200 light years away from Earth and was observed using NASA's Spitzer Space Telescope. Dr Marek Kukula of the Royal Greenwich Observatory in London, whose role is to interpret and comment on astronomical discoveries made by British scientists, explained that researchers initially used the SuperWASP (Wide Angle Search for Planets) robotic observatories operating continuously, all year around.
၎င်းဂြိုဟ်က ကမ္ဘာကနေ အလင်းနှစ် ၁၂၀၀ အကွာအဝေး မှာရှိပြီး နာဆာ (NASA) ရဲ့ Spitzer နက္ခတ်တာရာကြည့် မှန်ပြောင်း နဲ့ လေ့လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ လန်ဒန်မြို့ရှိ Royal Greenwich Observatory မှ Dr Marek KuKula က "သုတေသနပညာရှင်တွေဟာ ပထမဦးဆုံးတော့ Super WASP (Wide Angle Search for Planets) စက်ရုပ်သုံးပညာကို အသုံးပြုထားတဲ့ နက္ခတ်တာရာကြည့် အဆောက်အဦးများကို အသုံးပြုပြီး အဆက်မပျက် တစ်နှစ်ပတ်လုံး လေ့လာခဲ့ပါတယ်" လို့ ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။ Dr. Marek KuKula ဆိုတာကတော့ ဗြိတိသျှ သိပ္ပံပညာရှင်တွေရဲ့ နက္ခတ္တဗေဒနှင့် ဆိုင်သော ရှာဖွေတွေ့ရှိချက်တွေကို အဓိပ္ပါယ်ကောက်ပေးပြီး ထင်မြင်သုံးသပ်ချက်ကို ပေးရတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါတယ်။
They detected the planet, then it was observed with the Spitzer Space telescope, which according to Dr Kukula 'detected the heat coming from the planet, and from that heat signature they can tell what this planet is made from'.
Dr KuKula တို့က ၎င်းဂြိုဟ်ကို တွေ့ရှိပြီးနောက် Spitzer နက္ခတ်တာရာကြည့် မှန်ပြောင်း ဖြင့် ၎င်းကိုလေ့လာခဲ့ပါတယ်။ Dr KuKula ရဲ့ပြောကြားချက်အရဆိုရင် သူတို့ဟာ ဒီဂြိုဟ်ကထွက်လာတဲ့အပူရှိန်ကို တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒီအပူရှိန် ဖေါ်ညွှန်းချက်ကနေပြီး ၎င်းဂြိုဟ်ဟာ ဘာနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားသလဲဆိုတာကို ပြောနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။
Giant planet (ထူးထူးကဲကဲကြီးမားသောဂြိုဟ်)
The planet is very different to Earth. ‘It’sagiant planet,’ explains Dr Kukula, ‘a gas planet,abit like Jupiter in our solar system. But the interesting thing that they've discovered is that it hasavery different composition to the planets in our solar system. So where our planets haveahalf fraction of oxygen then carbon, this planet has it the other way around, it has more carbon than oxygen.’ This suggests that there is more than one way to makeasolar system and the range of planets in the universe could be much wider than previously thought.
၎င်းဂြိုဟ်ကြီးသည် ကမ္ဘာနှင့်မတူပါ။ "၎င်းဟာ ထူးထူးကဲကဲကြီးမားတဲ့ဂြိုဟ်ကြီးပါ။ ကျွန်ုပ်တို့နေစကြာဝဠာ အဖွဲ့ အစည်းမှာရှိတဲ့ ဂျူပီတာဂြိုဟ်နဲ့ နည်းနည်းတူတယ်။ ဒါပေမဲ့ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ သူတို့ရဲ့ ရှာဖွေ တွေ့ရှိချက်ကတော့ ၎င်းဂြိုဟ်ရဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံဟာ ကျွန်ုပ်တို့နေ စကြ၀ဠာအဖွဲ့အစည်းမှာရှိတဲ့ ဂြိုဟ်တွေရဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံနဲ့ မတူဘူးဆိုတဲ့ အချက်ပါပဲ ။ ကျွန်ုပ်တို့နေစကြာဝဠာရှိ ဂြိုဟ်တွေမှာ ကာဗွန်ထက် အောက်စီဂျင်ကပိုများပေမဲ့ ဒီဂြိုဟ်တွေကြီးမှာတော့ ပြောင်းပြန်ဖြစ်နေပြီး ကာဗွန်က အောက်စီဂျင်ထက် ပိုများနေပါတယ်" လို့ Dr.KuKula က ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။ ဒါကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့် နေစကြ၀ဠာအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကို တည်ဆောက်ပုံတည်ဆောက်နည်း တစ်နည်းထက်ပိုရှိပြီး ဂြိုဟ်အမျိုးအစားများမှာလည်း ယခင်က ထင်ထားတာထက် ပို၍ များပြားတယ်ဆိုတာကို သိရပါတယ်။
Diamonds and graphite (စိန်နှင့် ဂရက်ဖိုက်များ)
"ဒီဂြိုဟ်ကြီးတည်ရှိနေတဲ့ နေစကြာဝဠာအဖွဲ့အစည်းထဲမှာ ၎င်းနှင့်တည်ဆောက်ပုံခြင်း တူညီပြီး ၎င်းထက် ပိုပြီး သေးငယ်သော ဂြိုဟ်တွေရှိနေမယ်ဆိုရင် ၎င်းဂြိုဟ်တွေပေါ်မှာရှိတဲ့ ကျောက်တုံးတွေမှာ ကာဗွန်၊ စိန်ကဲ့သို့ သော သတ္တုများဖြင့် ပြည့်ဝနေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအချက်ကတော့ ကျွန်ုပ်တို့ ကမ္ဘာနှင့်မတူပါ။ ကမ္ဘာပေါ်ရှိ ကျောက်တုံးများမှာတော့ ဆီလီကာ (Silica) သတ္တုဓါတ်တွေပဲ ရှိပါတယ်။ ဒီအချက်ကနေပြီး စိန်ဂြိုဟ် (diamond planet) ဆိုတဲ့ စိတ်ကူးဖြစ်ပေါ်လာတာ ဖြစ်ပါတယ်။ တကယ့် လက်တွေ့မှာတော့ ထို့ကဲ့သို့သော ဂြိုဟ်ကို မတွေ့သေးပါဘူး" လို့ Dr.KuKula က ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။ ဒါဟာ စိတ်ကူးယဉ်မှန်းဆချက်သက်သက်ပဲ ဖြစ်ပေမဲ့လည်း ဒီဂြိုဟ်ပေါ်မှာ ရှိနေမဲ့ မည်းနက်တဲ့ ဂရက်ဖိုက်ကျောက်များ ပြန့်ကြဲနေတဲ့ထူးဆန်းတဲ့ ရှုခင်းနဲ့ မျက်နှာပြင်ကျတော့လည်း ရေအစား စေးကပ်တဲ့ အရည်တွေနဲ့ ဖုံးလွှမ်းနေမဲ့ ပုံစံကို စိတ်ကူးယဉ်ကြည့်လို့ ရနိုင်ပါတယ်။
Text source - http://learnenglishteens.britishcouncil.org/uk-now/science-uk/carbo...
composition = ပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းပုံ၊ ပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းမှု။
Space Telescope = နက္ခတ်တာရာကြည့် မှန်ပြောင်း။
astronomical discoveries = နက္ခတ္တဗေဒနှင့် ဆိုင်သော ရှာဖွေတွေ့ရှိချက်များ။
researchers = သုတေသနပြုလုပ်သူများ။
planet = ဂြိုဟ်။
solar system = နေစကြဝဠာ။
minerals = တွင်းထွက်ပစ္စည်း
silica = ကျောက်၊ သဲ တို့တွင် တွေ့ရသော ဆီလီကွန် ဒြပ်ပေါင်း။
hypothetical = စိတ်ကူးသက်သက်မျှ ဖြစ်သော။
graphite = ခဲနက်။